RASMI: Naadiga UEFA ee sanadka oo la soo saaray… (Ronaldo, Messi iyo Lewandowski oo hor kacaya kooxda & Neymar oo qayb ka ah) – Gool FM
Haaruun January 20, 2021
(Yurub) 20 Jan 2020. Waxaa goor dhow lagu dhawaaqay 11-ka xiddig ee kusoo baxay kooxda ugu wanaagsan xiriirka UEFA ee sanadka 2020.
Kooxdan ayaa ka kooban 11-kii xiddig ee ugu bandhigga wanaagsanaa sanadkii tagay sida lagu soo saaray codeyn uu sameeyay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA.
Robert Lewandowski oo gacanta ku dhigay laacibka ugu wanaagsan FIFA ee sanadkii tagay ayaa hor kacaya safkan, waxaana sidoo kale ku jira Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo mar kale kooxdan ka soo muuqday.
Bayern Munich ayaa ku leh safkan Goolhaye Manuel Neuer, Joshua Kimich iyo Alphonso Davies, halka Thiago Alcantara oo xagaagii ku biiray Liverpool uu sidoo kale safkan ku jiro.
Neymar Jr oo ka tirsan Paris Saint-Germain, Sergio Ramos oo hormuud ahaa ku guuleysiga Real Madrid ee La Liga iyo kubbad sameeyaha Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa sidoo kale qayb ka ah kooxdan.
Haddaba sawirka hoose kaga bogo naadiga UEFA ee sanadka (UEFA Team of the year)